Madaxweynaha Somaliland oo farageliyay khilaaf soo kala dhex-galay guddiga doorashooyinka | dayniiile.com
Home WARKII Madaxweynaha Somaliland oo farageliyay khilaaf soo kala dhex-galay guddiga doorashooyinka
Shalay ayaa waxaa khilaaf xoogan uu ka dhex biloowday Guddiga doorashoyinka Soomaaliland ,kaas oo keenay in qaar kamid ah xubnaha guddiga ay sheegaan inay xilkii ka qadeen Guddoomiyihii Guddiga doorashooyinka Soomaaliland, hayeeshee waxaa arrintaasi farageliyay Madaxweynaha Somaaliland Muuse Biixi Cabdi.
Kulan gaar ah ayuu Madaxweynaha Somaaliland Muuse Biixi Cabdi la qaatay Xubnaha Guddiga doorashooyinka Somalilnad, iyaga oo labada dhinac isla qaatay in arrinkii khilaafka dhaliyey loo maro hab sharci ah.
War kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta Somaliland oo lagu faah faahinayay Kulanka ayaa waxaa lagu sheegayin Madaxweyne Muuse Bixi Cabdi uu kulamo kala duwan la yeeshay xubnaha guddiga doorashooyinka, ka dib markii shalay oo ay taarikdhu ahayd 27-ka April, 2022, ay guddigu soo saareen laba war oo is-khilaafsan.
Ka dib wada-hadal iyo wada-tashi, madaxweynaha iyo xubnaha guddiga doorashooyinka ay isla-qateen in arrintaasi khilaafka dhalisay loo marro sharciga. islamarkaana labada dhinac aannu midna wax war ah soo saarin inta laga war-sugayo wixi sharcigu dhiggayo.
Fargelintaan uu Madaxweynaha Somaliland ku sameeyay khilaafka soo kala dhex-galay Guddiga doorashooyinka Somaaliland ayaa waxaa la sheegay inay ku cadaadiyeen Xisbiyada mucaaradka maadaama ay soo dhow dahay doorashada Madaxtooyada.
Previous articleDoorashada Guddoomiye kuxigeenada Golaha Shacabka oo Maanta dhaceysa
Next articleMareykanka iyo Ruushka oo isweydaarsaday maxaabiis